Cofttek Nhau - Kudya kunowedzera zvakasvibirira zvigadzirwa
Mushure mekudzidza kwe2019-kwakagumisa kuti Nicotinamide Mononucleotide yakachengeteka kuti ishandiswe nevanhu kana mashandisirwo ayo akaganhurirwa kune yakatemwa muganho, makambani mazhinji ekugadzira akapinda mumusika nezvipo zvavo. Uku kuwanda kwesarudzo kwakasiya vatengi vachivhiringidzika kuti ndeipi Nictonimade Mononucleotide (NMN) yekuwedzera iri yakanakira ivo. Mune maonero edu, yakanakisa yekurwisa-kukwegura inowedzera yaNico ...
Kana iwe uchitsvaga yakanaka Magnesium L-Threonate yekuwedzera, isu tinokurudzira kutenga iyo Magnesium Threonate poda kubva kuCofttek. Iyo kambani inoti inosimudzira bioavailability ye magnesium kumuviri. Iyo kambani zvakare inoti iyo hupfu hwakapihwa nekambani inotsigira ndangariro basa uye inosimudzira yese cognitive basa. Vanobatsirawo vashandisi kurara zviri nani. Cofttek ndeyeMagnesium L-Threonate vatengesi vano ...
Kana iwe uchitsvaga yepamusoro-soro Palmitoylethanolamide (PEA) poda yekutengesa, saka uri panzvimbo chaipo. Isu tiri vamwe vevanonyanya kuzivikanwa, vanoziva, uye vane ruzivo Palmitoylethanolamide (PEA) vagadziri muChina. Isu tinopa yakachena uye yakasungirirwa zvigadzirwa izvo zvinogara zvichiongororwa nepasirose-kirasi yechitatu-bato murabhoritari kuve nechokwadi chekuchena uye chengetedzo. Isu tinogara tichiendesa odha kuyambuka US, Europe, ...